Fri, Jul 10, 2020 at 12:36pm
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनल समिकरण पुरा
काठमाडौं, २० जेठ प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियाेगिताकाे सेमिफाइनल समिकरण पुरा भएको छ। सोमबार भएको खेलमा पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको प्रदेश तीन विजयी भएसँगै अन्तिम चार पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको हो। समूह ‘ए’ बाट प्रदेश तीन बिजेता र एपीएफ क्लब उपविजेता तथा समूह ‘बी’ बाट नेपाल पुलिस क्लब बिजेता र त्रिभूवन आर्मी क्लब उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका हुन्। अन्तिम चारमा प्रदेश तीनले आर्मी..
पोखरा, २० जेठ । दोस्रो अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन महोत्सवअन्तर्गतको अन्नपूर्ण म्याराथनको उपाधि खगेन्द्र भाटले प्राप्त गर्नुभएको छ । अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण दिवसका अवसरमा अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट घान्द्रुकसम्मको ४२.१९५ किलोमिटर दूरी चार घण्टा छ मिनेट ५३ सेकेण्डमा पार गर्दै उहाँले उपाधि जित्नुभएको हो । त्यस्तै हरिकुमार रिमालले उक्त दूरी चार घण्टा १४ मिनेट ४० सेकेन्डमा पार गर्दै द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएको छ ।..
शकिब अल हसन सबैभन्दा तेज क्रिकेटरः २५० विकेट र ५ हजार रन पूरा
काठमाडौँ, २० जेठ । बंगलादेशका अलराउण्डर खेलाडी शकिब अल हसन सबैभन्दा तेज क्रिकेटर बन्दै एकदिवसीय क्रिकेटमा २ सय ५० विकेट र ५ हजार रन पूरा गरेका छन् । ३२ वर्षीय हसनले आफ्नो २५० औँ विकेटमा आइतबार साउथ अफ्रिकाका ओपनर ब्याट्सम्यान एडन मरक्रमलाई आउट गर्न पुगेका थिए । सकिबले अहिलेसम्म १९९ एकदिवसीय खेल खेल्दै यो रेकर्ड बनाएका हुन् । यसअघि सनथ जयसुरियले ३०४ म्याच खेल्दै..
काठमाडौँ, २० जेठ । विश्व कप क्रिकेट अन्तर्गत बंगलादेशले बलियो प्रतिद्वन्द्वी दक्षिण अफ्रिकालाई २१ रनले पराजित गरेको छ। बंगलादेशले पहिले ब्याटिङ गर्दै दिएको ३३१ को लक्ष्यको पच्छाएको दक्षिण अफ्रिकी ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ३०९ रनमा सीमित भयो । दक्षिण अफ्रिकाविरूद्ध बंगलादेशले विश्व कप इतिहासमा निकालेको यो दोस्रो जित हो। यसअघि बंगलादेशले सन् २००७ मा जित दर्ता गराएको थियो। त्यसबेला बंगलादेशले दक्षिण..
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : साविक विजेता एपीएफको पहिलो हार
काठमाडौं, १९ जेठ एपीएफले तेस्रो प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटमा पहिलो हार बेहोरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतवार समूह ए अन्तर्गत भएको खेलमा एपीएफलाई प्रदेश नम्बर ५ ले डिएल मेथडमा ३ विकेटले पराजित गरेको हो। यसअघि लगातार तीन खेल जितेको एपीएफ समूह को अन्तिम खेल हारेपनि सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। पहिलो जित हात पारेको प्रदेश ५ ले भने ३ खेलबाट ३ अंक जोडेको छ..
काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने पल्सर स्पोर्टस् अवार्डको विधा 'पिपुल्स च्वाइस अवार्ड'को मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ । मनोनयनमा फुटबलकी सावित्रा भण्डारी, क्रिकेटका सन्दीप लामिछाने, भलिबलकी रेश्मा भण्डारी, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र शारीरिक शुगठनका महेश्वर महर्जन छनोट भएका छन् । वर्ष २०७५ सालमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ-साथै सञ्चारमाध्यम तथा समर्थकमाझ चर्चामा रहेका उत्कृष्ट पाँच खेलाडी छनोट गरी मनोनयन गरिएको मञ्चले..
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : प्रदेश २ लाई पराजित गर्दै पुलिस सेमिफाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं, १९ जेठ विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । टियु (कीर्तिपुर) क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको समूहको अन्तिम खेलमा पुलिसले प्रदेश दुईलाई १ सय ५६ रनले पराजित गर्दै समूह ‘बी’ को विजेता बनेको हो । २ सय ५४ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको प्रदेश दुईले २९ ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा ९७ रन..
काठमाडौँ, १९ जेठ । लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ । छैठौं पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जित्ने क्रममा लिभरपुलले शनिबारराति टट्नहाम हट्सपरलाई २–० गोलले हरायो । खेलको दोस्रो मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै मोहमद सलाहले लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए । मोउसा सिसिकोले डिबक्स भित्र हेन्ड गरेपछि पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई सलाहले गोलमा परिणत गरेका थिए । च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा छिट्टो गोल गर्ने..
विश्वकप क्रिकेट: श्रीलंकाको लज्जास्पद हार, न्युजिल्यान्डसामू निरिह
एजेन्सी, १८ जेठ गएकाे संस्करणको उपविजेता न्यूजिल्याण्डले इंग्ल्याण्डमा जारी आईसीसी विश्वकपको पहिलो खेलमा जित हात पारेको छ । शनिबार भएकाे पहिलाे खेेलमा न्यूजिल्याण्डले श्रीलंकालाई १० विकेटले हरायो । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलंका २९ ओभर २ बलमा १३६ रन बनाउँदा अलआउट भयो । उसका लागि दिमुथ करुणारत्नेले अर्धशतक पार गर्दै ५२ रन बनाए भने कुशल परेराले २९ तथा थिसरा परेराले २७..
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आर्मीको विजय यात्रामा पूर्णबिराम, नेपाल पुलिस क्लब ५० रनले विजयी
काठमाडौँ, १८ जेठ नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ । शनिबार भएको खेलमा नेपाल आर्मीलाई ५० रनले हराउँदै पुलिसले लगातार तेस्रो जित हात पार्यो । कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पुलिसले ४८ ओभर चार बलमा एक सय ६१ रनमा अलआउट भयो । खराब सुरुवात गरेको पुलिसले २४ रन बनाउँदा तीन विकेट गुमाएको थियो ।..
काठमाडौँ, १७ जेठ पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजले विजयी सुरुवात गरेको छ। विश्वकपको उद्घाटन खेलमा हिजो इंग्ल्याण्डले दक्षिण अफ्रीकालाई पराजित गरेको थियो। ट्रेन्ट ब्रिजमा टस हारेर ब्याटिंग गर्ने क्रममा पाकिस्तान १०५ रनमै समेटिन पुगेपछि १०६ रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले १३.४ ओभरमै भेट्यो। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा वेस्ट इन्डिज ओपनर क्रिस गेलले अर्धशतकिय इनिंग खेले। ५० रन बनाएका उनले ३४..
नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका उमेश पटवाल को हुन् ?
काठमाडौं, १७ जेठ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा उमेश पटवाल नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टका अनुसार ७ हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने गरी पटवाल प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका हुन्। पटवालकाे पारिश्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले उपलब्ध गराउने छ। ‘पटवाल नेपाल आइसकेका छन् । उनको पारिश्रमिक पनि आईसीसीले नै उपलब्ध गराउने छ’, सदस्यसचिव बिष्टले भने। सदस्यसचिव बिष्टले राखेपले प्रशिक्षक..
अर्जेन्टिनी स्टार मेसीलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको टिप्स
काठमाडौँ, १७ जेठ । अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसीलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले फिफा विश्वकममा जित हात पार्न महत्वपूर्ण सल्लाह दिएका छन् । गतवर्ष अर्जेन्टिनी टिम विश्वकम जित्न असफल भएको थियो । ओबामाले मेसीलाई भने ‘टिमको भावना नमिल्दा क्षमता भएर पनि अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्न नसकेको हो । त्यसैले टिमको एकरुपताका लागि पनि मेसीले टिम भावनालाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।’ ओबामाले अर्जेन्टिनले विश्वकप जित्न नसक्नुको कारण..
विश्वकप क्रिकेट : दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध इंग्ल्याण्डको सानदार जित, बेन स्टोक्स बने हिरो
काठमाडौँ, १७ जेठ आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा इंग्ल्याण्ड पहिलो खेलमा नै विजयी भएको छ । इंग्ल्याण्डले दक्षिण अफ्रिकालाई एक सय चार रनले हरायो । लण्डनस्थित द ओभल मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको इंग्ल्याण्डले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै तीन ३११ रन बनायो । कमजोर सुरुवात गरे पनि इंग्ल्याण्डको पारीलाई जेसोन रोय र जोय रुटले बचाए । एक रनमा पहिलो विकेट गुमाएको उसका..
विश्वकप क्रिकेट महाकुम्भ आजदेखि : उद्घाटन खेलमा इंग्ल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै
काठमाडौं, १५ जेठ अबको करिब एक महिना सबैको ध्यान विश्वकप क्रिकेटले केन्द्रित गर्नेछ । सबै टिम इंग्ल्यान्ड पुगिसकेका छन् भने सबैको ध्यान अब कुन टिमको प्रदर्शन कस्तो र कुन खेलाडीले के गरे ? भन्नेतर्फ नै केन्द्रित हुनेछ । विश्वकप क्रिकेट भोलि लण्डनको किनिङटोन ओभलमा भब्य उद्घाटनसँगै सुरु हुनेछ । उद्घाटन खेलमा आयोजक इंग्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । इंग्ल्यान्ड आफ्नो पहिलो..
प्रधानमन्त्री क्रिकेट कप : पुलिस क्लब विजयी
काठमाडौँ, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबारको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ । पुलिस क्लबले प्रदेश नं १ लाई ७५ रनले पराजित गरेको हो । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले ब्याटिङ गर्दै ४३ दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १८५ रन बनायो । १८६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा प्रदेश १ ले ३८ दशमलव तीन ओभरमा सबै..
हजार्ड रियल मड्रिड जाने पक्का, कति मूल्यमा फाइनल भयो डील ?
काठमाडौँ, १५ जेठ । चेल्सीका बेल्जियन स्टाइकर इडेन हजार्ड रियल मडिड जाने पक्का भएको छ । यस सिज ठूलो संख्यामा टिममा खेलाडी परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको रियल मडिडको यो पहिलो सफल र ठूलो डील हो । ‘द सन’का अनुसार हजार्डलाई अनुबन्ध गर्नको लागि रियल मड्रिडले ११५ मिलियन पाउण्ड (१४५ मिलियन डलर) चेल्सीलाई दिनेछ । अर्को बर्ष हजार्डको चेल्सीसँग सम्झौता सकिने हुनाले फ्री–ट्रान्सफरबाट बच्न..
प्रधानमन्त्री क्रिकेट कप : आर्मी क्लबको शानदार प्रदर्शन, सेमिफाइनलमा प्रवेश
काठमाडौँ, १४ जेठ । विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मुलपानी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई ११७ रनले पराजित गरेको हो । कर्णाली प्रदेशले टस जितेपछि आर्मीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो । आर्मीले ५० ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै २९० रन बनायो । दुई सय ९१ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको..
अस्ट्रेलियन बलरले भने - विश्वकपमा इङ्ल्याण्डलाई हराउन कठिन हुनेछ
एजेन्सी, १४ जेठ । विश्वकप सुरू हुनु अघि अस्ट्रेलियाका पूर्व राष्ट्रिय बलर ग्लेन म्याक्ग्राको नजरमा इङ्ल्याण्ड यस विश्वकपको प्रबल दाबेदार हो । उनले यस विश्वकपमा आयोजक इङ्ल्याण्डलाई पराजित गर्नु सबैभन्दा कठिन भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो खेल जीवनमा सर्वाधिक विकेट इंल्याण्ड विरूद्ध लिएका छन् । विश्वकपको इतिहासमा उनले सर्वाधिक ७१ विकेट लिएका छन् । उनी २००७ को विश्वकपमा 'प्लेयर अफ द..
एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट - एपिएफले १२६ रनको लक्ष्य पायो
काठमाडौँ, १३ जेठ राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमले विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबाई जितका लागि १२६ रनको चुनौती दिएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले ३७ दशमलव १ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १२५ रनमा समेटियो । उसका लागि लोकेस बमले सर्वाधिक ३० रनको योगदान दिँदा विपीन रावलले २१..
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : सुशनको ह्याट्रिक सँगै आर्मीद्वारा प्रदेश एक १ सय १३ रनले पराजित
काठमाडौँ, १२ जेठ प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार किर्तिपुरस्थित त्रिवि किक्रेट मैदानमा भएको खेलमा त्रिभूवन आर्मी क्लबले प्रदेश एकलाई ११३ रनले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले ४५ ओभर ३ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै २ सय ४ रन बनाएको थियो। उसका लागि राजेश पुलामीले सर्वाधिक ५६, हरिबहादुर चौहानले ४१, कप्तान विनोद भण्डारीले ३० र करण केसीले २६..
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न समिति गठन, यस्तो छ तयारी !
चितवन, १२ जेठ रामपुरमा निर्माण हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पूरा गर्न जिल्लास्थित सरकारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिको सहभागितामा विभिन्न समिति गठन गर्न लागिएको छ । रङ्गशालालाई समग्र जिल्लाले अपनत्व लिने सोचका साथ विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारी उद्योग व्यवसायी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा रहने समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका..
अझै कती लाग्ला मूलपानी क्रिकेट मैदान सम्पन्न हुन ?
काठमाडौँ, १२ जेठ ..
आइसीसी विश्वकप २०१९ : अभ्यास खेलमा भारतको खराब सुरुवात
काठमाडौँ, १२ जेठ । विश्वकप अघि शनिबार भएको अभ्यास खेल(वार्म अप)मा भारत न्यूजिल्याण्डसँग ६ विकेटले पराजित भयो । आइसीसी विश्वकप २०१९ का लागि इंग्ल्याण्ड पुगेको भारतीय टोलीले खराब सुरुवात गरेको हो । भारतले दिएको १ सय ८० रनको लक्ष्य न्यूजिल्याण्डले ३७.१ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर भेटाएको थियो । रोज टेलरले ७१ र कप्तान केन विलिम्सनले ६७ रनको पारी खेल्दै न्यूजिल्याण्डलाई सहज जित दिलाएका..
विश्वकप क्रिकेटअघिको अभ्यास खेलमा अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिका विजयी
काठमाडौं, ११ जेठ आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटअघिको अभ्यास खेलमा अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिका विजयी भएका छन् । इङ्ल्यान्ड र वेल्समा यही मे ३० देखि सुरु हुने विश्वकपको तयारीका लागि भएको खेलमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई ३ विकेटले पराजित गरेको हो । ब्रिस्टोलमा पाकिस्तानले दिएको २६३ रनको लक्ष्य अफगानिस्तानले ४९ ओभर ४ बलमा ७ विकेट गुमाएर पुरा गर्‍यो । अफगानिस्तानको जितमा हाम्सतउल्लाह शहिदीले अविजित ७३ रनको अर्धशतकीय..
काठमाडौँ, १० जेठ । तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्बले प्रदेश नं २ लाई पराजित गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा आर्मीले प्रदेश नं २ लाई १७१ रनले पराजित गरेको हो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा नौ विकेट गुमाउँदै २७८ रन बनायो । २७९ रनको विजयी..
Results 1928: You are at page 24 of 65